Home Wararka Shirkadda Spectrum oo lacag joogta la siin jiray iyo DFS oo ka...
Shirkadda Spectrum oo lacag joogta la siin jiray iyo DFS oo ka been abuurtay saamiga Soomaaliya (dhageyso)
Barnaamijka Galka Baadhistu ee VOA ayaa asbuucaan lagu soo qaatay xaraashaka Shidaalka Soomaaliya.
Toddobaadkii hore dawladda Soomaaliya waxay magaalada London kusoo bandhigtay xogta laga helay sahankii shidaalka ee laga sameeyey Soomaaliya intii u dhaxaysay sannadihii 2014-ka iyo 2016-ka. Sahankan waxaa iskaga dambeeyey labada shirkadood ee kala ah Soma Oil & Gas iyo shirkadda Spectrum.
Wararka ayaa sidoo kale sheegayo in Soomaaliya ay hoos u dhigtay saamiga ay ka qaadanayso shidaalka soo baxa maalmo uun ka hor intii aan la tegin shirka London, waxaana saamigaasi laga dhigay 54-66% halka dokumentiyo hore oo la qoray ay gaarsiinayeen ilaa 85%.
Previous articleAl Shabaab oo soo bandhigtay video howlgalo ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya (Video)
Next articleDeg Deg: Farmaajo oo caawa kala baxay koontada Gobolka Banadir $820,000
Xukumada Soomaaliya oo ka hadashay shirkii Garoowe ka dhacay (Aqriso)